Zorora murunyararo, Shamwari yangu Mike | Martech Zone
Chipiri, July 15, 2008 Chitatu, July 16, 2008 Douglas Karr
Pandakatanga kubva kuVirginia Beach kuenda kuDenver, yaingova ini nevana vangu vaviri. Zvaive zvakanaka zvinotyisa… basa idzva, guta idzva, muchato wangu wakapera, uye mari yangu yandaive nayo yaenda. Kuti ndichengetedze mari, ndaitora njanji diki kuenda kubasa zuva rega rega. Mushure memavhiki mashoma, ndakazosvika pakuita hurukuro diki nemukomana panjanji yechiedza inonzi Mike.
Uyu mufananidzo wandakawana pane saiti yemwanakomana waMike.
Mike aive murume akareba. Ini ndiri mukomana akanaka kwazvo, saka pamwe ndosaka takazvirova. Mushure mekuziva Mike, ndakaona kuti aishanda saMarshall aidzivirira vatongi vemubatanidzwa mudhorobha. Na 9/11, Mike aive nebasa rakakomba uye aifarira basa racho. Mweya wake wekudzivirira hauna kugumira pamatanho edare, futi. Ndaiwanzo kuwana Mike achiwana pekugara panjanji diki pakati pechidhakwa nevamwe vese vaifamba. Pakati pekutaura kwedu, ndaizoona kuti ndakarasa pfungwa iye achiona vamwe vanhu. Ivo havana kana kuziva kuti aivepo achivadzivirira.
Iyi yaive nguva muhupenyu hwangu iyo yandaive nemibvunzo yakawanda uye isina yakawanda mhinduro. Ndakatanga kuenda kuChechi uye rimwe remazuva angu ekutanga ndakatarisa mhiri kweChechi uye paive naMike naKathy. Handitendi zvaive zvakangoitikawo.
Mike akanditora pasi pepapiro rake ndokundivhurira imba yake kwandiri nevana vangu. Takapedza akati wandei mazororo naMike, Kathy nevana vavo (vakura). Kutaurirana kwedu pachitima kwainakidza uye zvimwe zvendangariro dzinondinakidza zvikuru dzandinadzo dzeDenver. Mike aida mhuri yake kupfuura chero chinhu chiri munyika. Hazviwanzo kuona iwe murume wechimiro chake achibvaruka, asi zvese zvawaifanira kuita kutanga kutaura nezve mhuri yake.
Kunze kwemhuri yake, Mike aivewo nehukama hwakasimba naJesu Kristu. Icho chaisave chimwe chinhu chaaipfeka paruoko rwake, asi zvaivewo zvisina kumbobvira zvave kure nehurukuro. Mike aive mumwe wevaKristu ava ainyatsotenda nezvese zvaakange apihwa. Ndakaona mufaro uye kuvimba muna Mike zvausingawani muvanhu vakuru vazhinji, zvakanyanya nekuda kwekutenda kwake uye nemhuri yake. Mike haana kuparidza, akaedza chaizvo kurarama hupenyu hwake maererano nezvaaifunga kuti Mwari vaizomuda. Mike akangogovana mufaro wake uye zvaakasangana nazvo mukuda kwake Mwari newe. Yakanga isina kumbomanikidza, isingatongotonge.
Ndakawana katsamba kubva kuna Kathy, mukadzi waMike, manheru ano aiti akashaya akarara. Ndiri mukuvhunduka. Ndashungurudzika kuti handina kuzombodzokera kunoshanyira Mike uye ndinotonyanya kusuwa kuti ndakanga ndisina kuramba ndichitaura nefoni. Kathy nemhuri yake vanofanirwa kuziva kuti aive akakosha chikamu chehupenyu hwangu. Handina mubvunzo kuti Mwari vakaisa Mike muchitima chimwe chete nguva zhinji sezvaAindiita kuti andibatsire kuwana nzira yangu.
Ndinogara ndichionga Mike, rudo rwemhuri yake, uye ndangariro dzinoshamisa dzavakapa kwandiri nemhuri yangu. Mwari akuropafadze, Mike. Zorora murugare. Tinoziva kuti uri kumba.
Tags: kuiswa kwekushambadzira
Jul 16, 2008 pa 1: 46 AM
Doug, ufakazi hwakadini kuhupenyu hweshamwari yako Mike. Zvinonzwika semurume anoshamisa aive nemhedzisiro kune wese waakasangana naye. Tinokutendai nekugovera nyaya yenyu uye nekugovana nezveuchapupu hunyoro hwaMike. Ndine hurombo nekurasikirwa neshamwari yako.
Jul 16, 2008 pa 11: 07 AM
Thanks Becky. Dzimwe nguva tinorerutsa avo vanotidzivirira, uye kunyange shamwari dzedu.
Jul 16, 2008 pa 11: 57 AM
Imwe shamwari ya Mike akabva andibata ndokundisiya akanditumirawo. Ini ndanga ndisingazive Steve, asi mukuverenga zvese zvatatumirwa - unogona kuona kuti aive akakosha sei mukomana aive Mike.
Jul 16, 2008 na2:21 PM
Ndatenda nemazwi ako makuru uye chinongedzo kune imwe post.
Vose vari vaviri vanoreva zvakawanda kumhuri yedu.
Jul 16, 2008 na2:38 PM
Minamato mizhinji iri kuenda kumhuri yako. Ini 'ndakwereta' mufananidzo wakanaka waMike wawaive nawo pane yako saiti. Mufananidzo wakanaka uye nemarangariro andinorangarira Mike.
Jul 16, 2008 na2:53 PM
Nyaya inobaya moyo paMike, so sorry nekurasikirwa kwako neshamwari yakanaka kudaro. Ndinofara kuti wakagovera izvi, inyaya yakanaka kudaro uye ndinofunga chiyeuchidzo chakakosha chekuti dzimwe nguva zvinhu zvinoshamisa zvinoitika sei nenzira dzinoshamisa.
Jul 21, 2008 na12:26 PM
Ndinokutendai zvikuru nokuda kwepositi yenyu pamusoro pababa vangu, ndinofara kunzwa kubva kune vakawanda poeple vairemekedza baba vangu zvakanyanya, isu tese tichavasuwa zvikuru, asi gara uchiyeuka kuti vari panzvimbo iri nani uye vachiri kutarisa. pamusoro pemunhu wese, achifara sezvaangave akamirira kuona mhuri yake neshamwari zvakare. tichengetei tose muminamato yenyu kunyanya amai.
zvakare ndinokutendai zvikuru !!!
Jul 21, 2008 na6:42 PM
Unobheja, Kevin! Aive mukomana uye Amai vako vanondiudza kuti iwe watova Baba vakuru, futi! Apuro hariwire kure nemuti.